Vaovao - Ny fiantraikan'ny mari-pana loko isan-karazany amin'ny fihetsem-pon'ny olombelona
Ny hafanan'ny lokon'ny fahasamihafana dia hamorona atmosfera samihafa.
Ohatra, ny loko mafana dia afaka mamorona atmosfera mafana, tantaram-pitiavana ary ahazoana aina, fa ny loko mangatsiatsiaka kosa dia hiseho mangatsiaka sy aolo ilay sary.
Ny mari-pana loko isan-karazany dia aseho etsy ambany .:
Izahay dia mizara ny maripanan'ny lokon'ny loharano maivana amin'ny sokajy telo:
1. Jiro fotsy mafana
Ny mari-pana amin'ny loko maivana dia mazàna manodidina ny 3000K, izay mitovy amin'ny hazavan'ny jiro, miaraka amin'ny singa maivana kokoa, manome ny olona fahatsapana mafana sy mahazo aina;
2. Jiro fotsy natiora
Ny mari-pana amin'ny lokony dia manodidina ny 4000K, izay hahatonga ny olona hahatsapa ho faly, mahazo aina ary milamina;
Ny mari-pana ny lokony dia manodidina ny 5500K ~ 6500K, ny loharanom-pahazavana dia manakaiky ny hazavana voajanahary, manana fahatsapana mamirapiratra izy ary afaka mampifantoka ny olona.
Ka dmari-pana loko hoose araka ny tontolo iainana.
Raha ny marina, ny mari-pana amin'ny loko dia misy fiantraikany amin'ny lafim-piainana rehetra iainantsika. Ohatra, rehefa mandeha misakafo any amin'ny trano fisakafoanana andrefana ny mpivady dia tokony hisafidy mari-pana miloko ambany sy malefaka kokoa ary mafana kokoa izy ireo.
Ho fanampin'ny trano fisakafoanana dia azo ampiasaina ao amin'ny lobby hotely, toerana fialan-tsasatra, toerana famakiana sns ny loharanom-pahazavana maripana ambany mari-pana, raha mila fanazavana fanampiny momba ny trano fisakafoanana, jiro hotely, mifandraisa aminay Haus Lighting raha mila fanazavana fanampiny.
Ho an'ny toeram-piasana avo lenta toy ny tontolon'ny birao, ny mari-pana amin'ny loko dia tsara kokoa hamiratra, mba hahafahan'ny mpiasa mifantoka amin'ny asany. Eo ambanin'ny mari-pana amin'ny loko antonony (manodidina ny 4000K), ny mpiasa dia afaka mitazona toe-tsaina feno sy fepetra tsara, amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny mpiasa. Ary ho an'ireo faritra miasa avo lenta toy ny ozinina, hopitaly, efitrano fihaonambe, mpampianatra, sns., Aroso ny tokony ho 4000K ny mari-pana.
Ho an'ny jiro pendant office kokoa, jiro valin-drihana, haus haus dia afaka manome anao ny fahazavana vahaolana feno mivantana.